कोरोना सम्बन्धि केहि जानकारी - सनातन ज्ञान
संसारका कुनै पनि स्वास्थ्यविद या वैज्ञानिक भनाउँदाहरुले
यी कुराहरु भन्न सक्दैनन् तर तपाइले सबैलाई भन्नुस्:
नाक मुख ढाक्ने मोकरा (मास्क) नलगाउनुस। यसले गर्दा शरीरको जीवनी शक्ति नष्ट हुने सम्भावना रहन्छ, संक्रमण र दमको रोगि बनाउने सम्भावना पनि बढ्छ। जतिबेला पनि जहाँ पनि मास्क लगाउनु प्रकृतिको नियम विरुद्ध छ। धुलो, धुवाँ आदि प्रदुषित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लगाउन सकिन्छ, त्यो पनि सुती कपडाले बनेको (आँफै बनाउन पनि सकिन्छ) या रुमाल, दोपट्टा, गलबन्दी आदि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ; N-95 मास्क त स्वास्थ्यका लागि झनै खतरनाक छ । मास्कसङ्ग कोरोना (कोविद-१९) को कुनै संबंध छैन।
कोविड-१९को परिक्षण कदापि नगराउनुहोस्। यदि गलतीले गराईसक्नु भएको छ भने पनि आत्तिनु पर्दैन; केहि हुँदैन।
यदि कसैको परिक्षण पोजिटिभ आएको छ भने बिर्सेर पनि त्यसलाई कुनै कोविद-वार्ड या आइसोलेसनमा नराखौं। त्यहाँ यति असुविधा छ कि स्वस्थ व्यक्ति पनि बिरामी हुन्छ। त्यसैले आत्महत्याको दर बढ्दैछ। जसलाई पहिले देखि कुनै रोग छ र कोविद-१९ पोजिटिभ देखिएको छ भने त्यस्तालाई पहिलेको रोगको उपचार राम्रो सङ्ग गराउनुहोस।
आफ्ना सबै परिचितहरुलाई सूचित गरिदिनुहोस् कि कोरोना (कोविद-१९) भनेको साधारण रुघाखोकी जस्तै हो र यो वर्षौंदेखि हाम्रो जीवनको एक अंश हो। यसबाट डराउनु पर्ने कुनै कुरो छैन।
राति सुत्नेबेला नियमित बेसार-पानी या दिनभरी २/३ पटक तुलसी, मरिच र अदुवाको काढा सेवन गर्नुहोस्, पाइन्छ भने स्थानीय नस्लका गाईको मूत्रमा लहरे गुर्जो पकाएर २ चम्मच सेबन गर्नुहोस्। सधैं प्राकृतिक आहार-विहारको नियम पालन गर्नुहोस्।
यदि कसैले “यतिगा मानिसहरुमा पोजिटिभ देखिरहेको छ त” भनेर भन्छ भने त्यसलाई सम्झाउनुहोस की यो सबै खेल परिक्षण किट र प्रयोगशाला बाट भैरहेको छ।
यदि यो कुराले कसैको चित्त बुझेन भने उसलाई कुनै दुईवटा अलग-अलग प्रयोगशालामा परिक्षण गराएर हेर्नुस। यसो गर्दा उसको एक ठाउँमा पोजिटिभ र अर्को ठाउँमा नेगेटिभ परिणाम आउन सक्छ। अथवा एउटा व्यक्तिलाई प्रत्येक दुई दुई घन्टाको फरकमा परिक्षण गराउँदा एक पटक पोजिटिभ र अर्को पटक नेगेटिभ आउँछ।
यदि कसैले “संसारमा यति धेरै मानिस किन मरिरहेका छन् त?” भनेर सोध्छ भने त्यसलाई सम्झाउनुहोस कि जति मानिस मरेका छन्, त्यसमा ९९% अलग-अलग रोगले ग्रसित थिए, जसमा ९०% मानिस ६० वर्ष भन्दा अधिक उमेरका छन्।
यदि कसैले युवा र बालबालिकाहरु पनि मरेका छन्” भन्छ भने उसलाई भन्नुस् कि जति पनि युवा या बालबालिकाहरु मरेका छन्, ति पहिले देखिनै अन्य रोगले ग्रसित बिरामी हुन्। यति भन्दा पनि मानेन भने त्यसलाई सम्झाउनुहोस कि कुनै पनि रोगको उपचारमा डाक्टरले आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्ने गर्दछन तर कोरोना (कोविद-१९)मा माथिको निर्देशन अनुसार उपचार गर्नु पर्दछ, जसमा धेरैजसो रोगीलाई औलोको औषधि (hydroxychloroquine) दिने गरिन्छ। यो औषधिले हृदयाघातको खतरा बढ्छ। कैयौं बिरामीको मृत्यु कोविद-१९ को नाउमा हृदयाघात बाट हुने गर्दछ।
कसैले यति भन्दा पनि मान्दैन भने त्यसलाई सोध्नुहोला- यदि औलोको औषधि (hydroxychloroquine) बाट रोगि ठीक हुन्छन भने खोपको आवश्यकता किन त? यदि यसले रोगि ठीक हुँदैनन् भने कोरोनाका बिरामीलाई यो खुवाउने निर्देशन किन दिइन्छ?
तै पनि कुनै व्यक्तिले मान्दैन भने त्यसलाई राम्रो सङ्ग सम्झाउनुहोस कि हरेक व्यक्तिको शरीरको प्रकृति अलग-अलग हुन्छ, इच्छा र आवश्यकता पनि अलग-अलग हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि बिरामीको उपचार गर्दा डाक्टरले आफ्नै योग्यता, अनुभव, वुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर उपचार गर्छ भने मात्र परिणाम उत्कृष्ट हुन्छ। तर यहाँ सरकारमा बसेका भ्रष्ट, अनुभवहीन, अयोग्य र स्वार्थि प्रवृत्तिका व्यक्तिले डाक्टरलाई निर्देशन दिँदैछन्- “कागजमा लिखिएको guidelines अनुसार मात्र तपाइँले कोविद-१९का रोगीको उपचार गर्नुहोला।”
यी कुराहरु हरेक व्यक्तिको मन-मस्तिष्कमा उत्पन्न डर र त्रास खतम गर्न र षडयन्त्र बाट बच्नका लागि सबैलाई भन्नु आवश्यक छ। ओ३म् शम्…
Posted in स्वास्थ्यTagged कोरोना, प्राकृतिक जीवनशैली, सनातन ज्ञान